प्रचण्डले अब झुठा कुरा नचल्ने भन्दै चेतावनीको भाषामा भने, ‘आगोसँग खेल्नु हुँदैन’ - Baikalpikkhabar
प्रचण्डले अब झुठा कुरा नचल्ने भन्दै चेतावनीको भाषामा भने, ‘आगोसँग खेल्नु हुँदैन’
३ साउन/ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेलाई लक्षित गर्दै ‘हिंजो टाउको काट्नेमा तपाईहरु पनि हुनुहुन्थ्यो नि’ भनेका छन् । प्रतिनिधिसभा संसदमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिन आव्हान गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले माओवादीलाई लोकतन्त्रको कुरा गर्नै नदिने खालको प्रवृत्ती देखा परेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘टाउको काट्नेमा त तपाई पनि हुनुहुन्थ्यो नि त ? तपाई शान्ति सम्झौताको विरुद्धमा हो ? माओवादी लोकतन्त्रको पक्षमा भएको किन चिन्ता ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘माओवादीलाई चाहिं लोकतन्त्रवादी हुन नहुने हो ? ७ राजनीतिक दल र माओवादीबीच यही हलमा सम्झौता भएको हो । कांग्रेसले पनि हतियार उठाएको हो । एमालेले पनि हतियार उठाएको हो । उनीहरु लोकतान्त्रिक हुने अनि माओवादीले चाहिं लोकतान्त्रिक हुन नपाउने हो ? ।’
प्रचण्डले अब झुठा कुरा नचल्ने भन्दै चेतावनीको भाषामा भने, ‘आगोसँग खेल्नु हुँदैन ।’ लामो भाषण गरेका प्रचण्डले व्यक्तिगत अहंकार र व्यक्तिवादी चरित्रले अगाडि बढ्न नसक्ने र त्यसको परिणाम ओलीले अझै भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए । ‘झुठा कुरा चल्दैन, भ्रष्टाचार गर्दैैनौं, गर्न पनि दिन्नौं, भन्ने एउटा अनि गर्ने अर्को ? अब यस्तो चल्दैन ।’
प्रचण्डले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई लक्षित गर्दै पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर संसद विघटन गर्न नपाउने बताए । ‘मलाई काम गर्न दिइएन, संसद विघटन गरें भनेर पाइन्छ ?,’ प्रचण्डले भने, ‘पार्टीभित्र विवाद मिलाउन नसकेको कारणले संसद विघटन गर्न पाइन्छ ? कुन लोकतान्त्रिक संस्कार हो यो ? पार्टी भित्रको बहुमतलाई स्वीकार गर्न नसक्ने र जबर्जस्ती सत्ताको खोलले खिच्न खोज्न पाइन्छ ? पाइँदैन ।’
सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई एमालेले विरोध गरेको प्रति पनि प्रचण्डले असहमति जनाए । ‘अहिले गोहिको आँशु चुहाएर हुँदैन, दुनियाका कसैले यस्तो पत्याउँछ ? बारबार जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गर्ने अनि दुनियाँलाई छल्न खोजेर हुन्छ ?,’ प्रचण्डले भने, ‘संविधानको धारा ७६ (५) प्रयोग हुँदा त्यत्रो चिन्ता ? अदालतले नियुक्त गरेको होइन शेरबहादुर देउवालाई, धारा ७६ (५) को व्याख्या भएको हो ।’
राष्ट्रपतिले ओलीले पेश गरेको निवेदन अनुसार यथार्थ नहेरी हुँदै नभएको १५३ भनेर ३ जनाको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिने कोशिस गरेको दाबी गर्दै प्रचण्डले १४९ जनाको हस्ताक्षर र ३ जनाको हस्ताक्षरलाई उस्तै मान्ने काम गरेको दाबी गरे । ‘संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च हुनेछ भनेर संविधानमै लेखेको होइन ? अदालतले बचायो संसदलाई अब किन चिन्ता ?,’ प्रचण्डले भने, ‘प्रतिपक्षको चिन्ता निर्दलीय हुने भयो भन्ने छ ।
किन बनाएको त निर्दलीय संविधान ? ।’ प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पेस गरेको विश्वासको मत दिन अपिल पनि गरे ।
आइतबार, ०३ साउन, २०७८, रातीको ०९:२२ बजे